Forex Trading Benefits | ECN Forex Trading Advantages amin'ny FXCC
Home / About / Nahoana no FXCC
Nahoana no FXCC? Ity ny antony ..
Maro ny mpikarakara ny indostriantsika izay maniry ny raharaham-barotra. Koa inona no manasaraka ny FXCC amin'ny hafa, nahoana isika no mieritreritra ny ho tsara indrindra? Nahoana ianao no tokony hivarotra, fa tsy amin'ny mpividy hafa? Inona no mahatonga antsika manokana?
Tsy voatery ho olona mendrika harambatambatra ianao mba hiainana ny fahasamihafana FXCC, manana fomba fiteny amin'ny FXCC izahay; "hazo oaka lehibe dia mitombo avy amin'ny gilasy madinika". Ampiasaintsika izany satria nahita maso ny mpanjifanay maro izahay, izay niara-niasa taminareo hatramin'ny nananganana anay, hiara-hiasa aminay ho lasa mpivarotra miavaka.
Noho izany dia ho faly izahay hanampy anao amin'ny faniriana an-tsitrapo, na inona na inona ampahany amin'ny fitomboan'ny vanimpotoana anananao. Vaovao mba hivarotra? Tongasoa, avelao atomboka. Mpanjifa efa za-draharaha? Heverinay fa manana zavatra ho anao ianao, tena mampiavaka ny fampisehoana aminao.
Mijoro ihany koa izahay amin'ny maha-"broker amin'ny lafiny" antsika. Saingy ahoana ny hoe "eo anilanareo"? Voalohany indrindra, tianay ny hahombiazanao, ilainareo ny hahomby ary hampivoatra sy hampivelatra ny fahaizanareo amin'ny maha-mpivarotra. Tena lojika izany raha mieritreritra an'izany ianao. Ny mpivarotra am-pahombiazana, mahay sy mahay, mahay dia mahay. Raha mahomby ianao dia hanohy hiara-hiasa aminay ary hankafy ireo tolotra rehetra atolotrao.
Tamin'ny voalohany dia nanomboka nivarotra ho toy ny mpividy tsotra sy mivantana avy amin'ny mpanakalo vola izahay ary rehefa nahatratra ny ankamaroan'ny zava-bitanay dia nitombo bebe kokoa izahay noho ny tsaratsara kokoa. Satria ny teknôlôjia eo amin'ny indostriantsika dia nandroso haingana be, dia nanaiky isika ary tao anatin'ny fivoaran'ny teknolojia rehetra, mba hahazoana antoka fa mbola nijanona teo amin'ny sisin'ny indostria izahay. Manana laza tena tsara izahay ankehitriny, mifototra amin'ny fikasanay voalohany hanatsorana ny fizotran'ny varotra, sady mametraka ny mpanjifa ny loha laharana amin'ny orinasa. Miarahaba ny tsirairay sy ny tsirairay amin'ireo mpanjifantsika amin'ny fanajana sy ny fiheverana lehibe indrindra isika.
Afaka manampy anao hahomby amin'ny famolavolàna fifanakalozana mangarahara tanteraka sy fanodikodinam-bola malalaka ho anao hivarotra; Ny baikonao dia mandeha eny amin'ny tsena ary mifanandrify, tsy misy fanelingelenana ny birao. Ny fampiasana modely ny ECN / STP dia manome antoka fa afaka miditra amin'ny tsena haingana araka ny fahafahan'ny teknôlôjia ankehitriny. Hahazo ny teny fohy tsara indrindra sy hameno ny tsena dia afaka manolotra, amin'ny fomba tsotra sy mangarahara araka izay azo atao.
Manampy anao koa mba hampivelatra toy ny mpivarotra amin'ny fikarakarana fitaovam-pikarohana amin'ny ankapobeny. Tsy ny lahatsoratra mahazatra mifototra sy ny tarehimarika marobe mampihetsi-po, izay matetika atolotra araka ny eritreritra, izay ho hitanao any amin'ny mpivarotra hafa. Fa tsara ho dinihina, fampahalalana manan-danja sy antsipiriany, hanampy ny fanapahan-kevitrao.
Fanompoam-pivavahana fotsiny isika. ECN Forex Ny mpampindram-bola dia mandray soa avy amin'ny saram-pihetseham-bola madinika. Ny avo kokoa ny varotra varotana ho an'ny mpanjifan'ny mpampindram-bola, ny avo kokoa ny mpampindram-bola profitability. Ny fametrahana ny baikonareo hivarotana sy ny lamandy ho vita haingana araka izay tratra, dia ny tanjontsika sy ny tanjontsika mivantana.
Izany no anananareo; Ny fampidiran-dresaka momba antsika, izay toy ny: mazava, mendrika ary mazava tsara ho an'ny tolotra tsirairay izay omen'ny mpanjifantsika. Azonao atao ny manandrana ny sasany amin'ny sisa, nahoana moa no tsy hamela antsika hizara ny antony hieritreretantsika fa isika no tsara indrindra?